नेपालकै ठूलो जिल्ला डोल्पा, विकराल हुँदै ‘हेपाटाइटिस बी’ ! - kageshworikhabar.com
नेपालकै ठूलो जिल्ला डोल्पा, विकराल हुँदै ‘हेपाटाइटिस बी’ !
२१ माघ, जाजरकोट । नेपालकै ठूलो जिल्ला डोल्पा १ अधिकांश भूभाग कडा चट्टान र हिमालले ढाकिएको क्षेत्रभित्र पर्दछ । टेलिफोन सेवादेखि सडक यातायातको पहुँचमा उपल्लो डोल्पा अहिलेसम्म पुग्न पुगेको छैन । खासगरी तीनवटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा, टेलिफोन सेवादेखि खाद्यान्नको पीडा यहाँ बस्ती भएदेखि यहाँका मानिसले भोग्दै आएका छन् ।
Previous articleउत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति जनतामा पुनः आश
Next articleझाँक्रीलाई कारबाही गर्न ओलीका नेतृहरुकाे दबाब